နိုလှိုင်း ● နှစ်​သစ်​ဟောင်း - နိုလှိုင်း ● နှစ်​သစ်​ဟောင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉ ၁။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့ ၂၀၁၈ဆိုတာကြီးကို ထားခဲ့လိုက်​ရတယ်​​ပေါ့။ ဖြစ်​ပျက်​ခဲ့သမျှ​ကိစ္စေ...
Bernie Sanders calls Trump racist. - https://www.cbsnews.com/news/bernie-sanders-calls-trump-racist-at-south-carolina-mlk-day-speech/
Did Duterte change the rules of Philippine elections? - Dutertismo still hasn’t fundamentally changed how political power is sought and won. The post Did Duterte change the rules of Philippine elections? appea...
ငါဒီမြေမှာမွေးလာတာ ငါဒီမြေမှာ ကြီးပြင်းလာတာ မင်းတို့ကပြောတယ် ဧည့်သည်ကဧည့်သည်လိုနေရင် အိမ်ရှင်က ဧည့်ဝတ်ကျေမယ် ha ha - Soe Kyaw Thu “ငါဒီမြေမှာမွေးလာတာ ငါဒီမြေမှာ ကြီးပြင်းလာတာ မင်းတို့ကပြောတယ် ဧည့်သည်ကဧည့်သည်လိုနေရင် အိမ်ရှင်က ဧည့်ဝတ်ကျေမယ် ဘာတဲ့ ဘယ်သူ့ထမင်းတစ်လုပ်မှ အလကား...
From 2017--Radio Free Asia Cambodian branch closed. - https://www.phnompenhpost.com/national/rfa-shuts-down-cambodia-operations-amid-media-crackdown
A Visit to the Burmese Crafts Pwe (Festival) - (The entrance of the 'Made in Myanmar' festival.) The festival was held at Kandawgyi Lake, located east of the Shwed...
Miles Kington : The Burma Road -
အရှုံးသမားတစ်ယောက်ရဲ့တေး သို့မဟုတ် Take Good Care of My Baby. - ကမ္ဘာဦးအစက ကောင်းကင်ပြာတွေအောက်မှာ ပြေးလွှားခဲ့ကြသလို လွတ်လပ်ပေ့ါပါးမှုမျိုးနဲ့ မင်းနဲ့ငါ အဆုံးမဲ့ လွတ်လပ်ဖူးကြတယ်ပဲ ဆိုပါစို့ အချစ်ရေ . . .သံဝေဂတေးတို...
"Which Song, My Dear Girl?" and "Drawing," by Min Ko Naing - Burmese girl in school uniform, Anut21ng Photo, licensed from Shutterstock.com The poet's birth name is Paw Oo Tun, but to many around the round, he's Min ...
မြန်မာ့မြေ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းပုံ အကျဉ်း (အပိုင်း- ၁) - မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အတိတ်သမိုင်းလေ့လာသူများ၊ ပထဝီဆိုင်ရာဗဟုသုတ ရှာဖွေသူများအတွက် ယနေ့ရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားသော မြေပုံနယ်နိမိတ်အတွင်း မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ကျောက...
ခံစားမိတဲ့ အနုပညာ ဂျူနီယာဝင်း - ခံစားမိတဲ့ အနုပညာ (ရနံ့သစ်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ။)  အော်စကာဝိုင်း (Oscar Wilde) သည် ၁၈၉၅ မေလမှစ၍ ၂ နှစ်တိုင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်ကျခဲ့ရသည...
ထွက် သက် ၀င် သက် တွေ ထဲ
အ တွေး တွေ ခ ဏ ခ ဏ ပြုတ် ပြုတ် ကျ တယ်
အ သက် နောက် တ ချက် ရှု သွင်း အ သစ် က ပြန် စ မယ်
အဲ့ ဒီ လို နဲ့ နေ့ တ နေ့ ကို ပြန် စ
လ တ လ ကို ပြန် စ
နှစ် တ နှစ် ကို ပြန် စ
ဘ ၀ သစ် ကို ပြန် စ
နောက် ဘ ၀ ကို ပြန် စ ဖို့ ကြံ ဆ…။
စ ခွင့်ရှိသရွေ့ ပေါ့ ကေ..
အမှန်ပဲကေ. ဒီကဗျာလေးဖတ်ရတာ အမ တရားမှတ်တာကို ရေးထားသလိုပဲ. အဆုံးမရှိတဲ့အစထဲက ဘဝတွေက သံဝေဂရစရာ. ဒါပေမယ့် မိုက်မိုက်မဲမဲ အတွေးတွေနဲ့ လုံးလည်လိုက်နေတုန်းပဲ
ခုပဲ တရားထိုင်ရာက ထလာတာ... ကိုယ့်ပြောတာကျလို့.... ကွက်တိပဲ... ဟိုက်... သယ်ရင်းတန်ခူးရေးတာနဲ့ သွားတူနေတယ်...
ဟုတ်တယ်လေ..။။ ကျမလည်း မနက်ခင်း meditation လုပ်ရင်း အဲ့ကဗျာလေး ပြုတ်ကျလာတာ။း)